Thierry Henry oo si cad weerarugu qaaday Cristiano Ronaldo “Waligaa ha isku malayn in aad tahay Wax aadan ahayn”. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Thierry Henry oo si cad weerarugu qaaday Cristiano Ronaldo “Waligaa ha isku malayn in aad tahay Wax aadan ahayn”.
Thierry Henry oo si cad weerarugu qaaday Cristiano Ronaldo “Waligaa ha isku malayn in aad tahay Wax aadan ahayn”.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 15-06-16 7:02 AM Weeraryahankii Hore ee Xulka qaranka France iyo Naadiga Arsenal Thierry Henry ayaa dhaliil weyn u soo jeediyey Weeraryaahnka Portugal iyo Real Madrid Cristiano Ronaldo kaas oo uu ku tilmaamay in uu yahay qof isu Maleeyey Wax uusan ahayn.
Thierry Henry oo sitoos ah uga hadlayey TV ga Sky Sport kulankii koobka yurub ee Portugal iyo Iceland ayaa yiri Ronaldo waa Ruux isla weyn waxa uuna Garoonka ku soo Galay in uu Goolal badan ka dhalin doono Wadanka ay la dheelayeen fiiri qaabka uu Garoonka u soo Galay wuu soo booday oo muxuu dheeryahay Cayaartoyda kale?
Henry oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri hadii aan ahay Macalinka dalka Portugal Ronaldo Waxaan u sheegi lahaa in uusan yasin cidna Kubada Cagtuna tahay mid hada laysla bartay oo aan loo awood sheegan karay Wadan yimid koobka yurub isaga oo sidoo kale Sabaabta Portugal u badain weysey ku tilmaamay in ay haayd isla Weynaanka Ronaldo.
Cristiano Ronaldo ayaa dhawaan isku Caleemo Saaray in uu yahay Cayaaryahankii ugu fiicnaa ee Caalmka soo Maray 20 kii Sano ee la soo dhaafay taas oo dad badan ku tilmaameen in Ronaldo ka bad badiyey Waxa uu yahay.